Wonke umuntu wesifazane ubhekene nenkinga uma ngesikhathi sokukhulelwa esifubeni libuhlungu. Okufanele ukwenze Kulezo zimo, nokuthi kubangelwa, kungatholakala esihlokweni sethu.
Ukukhulelwa kuba inkathi wemfanelo kakhulu futhi ebalulekile empilweni salowo nalowo muntu wesifazane. Phakathi umzimba owesifazane wakhe asitholayo uchungechunge izinguquko, okuyinto zibangelwa ukwanda isibalo hormone ocansini nowesifazane. Uma ucela umama okhulelwe, lokho kushintshile kakhulu umzimba wakhe, yena ayeliqamba a webele. Lapho isidumbu sowesifazane elungiselela umama, ke ngenkuthalo iqala ukuthuthukisa "ukukhulelwa-hormone okuthiwa i", ekhuluma ngokwesayensi, human chorionic gonadotropin. Yingenxa yalesi, webele esifazane phathelana nozwela futhi kakhulu kwandisa ngosayizi.
Ukukhetha ubhodisi kwesokudla
Eziduduzayo lula kuyizinto imfuneko isifuba besifazane ngesikhathi sokukhulelwa, ukuthi kuncike okukhethayo bra. Ngakho-ke, lapho le ngxenye Lingerie Pick, sinake ukujiya kanye ukuma ezizibeni ehlombe: Straps akufanele yayincane kakhulu kanye brassiere akumele zibe amathambo. Umsebenzi oyinhloko we-ubhodisi, okuyinto angathengwa sowesifazane okhulelwe ukunciphisa ubuhlungu besifuba ngesikhathi sokukhulelwa, ngenxa bephakamisa nezindlala mammary. Kuwufanele ngokwazi ukuthi lokuphuma phambili okumisiwe ubuhlungu incike eside, ngakho ekupheleni kwenyanga yesithathu yokukhulelwa, ubuhlungu webele incipha.
Omama abakhulelwe akufanele bayakhohlwa ukuqina webele, ngokuvamile lezi izinqubo kuhle ukuqala kusukela ngenyanga yesihlanu sokukhulelwa. Ngokwesibonelo, umoya obhavu kanye ukusulwa ezimanzi okungafani intuthuko yamakhono lactation mastitis.
Iqiniso lokuthi webele njalo ubuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa, ngenxa yezinguquko ukuthi ngokuyinhloko ezithinta amabele zabesifazane. I nezindlala mammary abesifazane abakhulelwe ezwelayo futhi ikhukhumale, okuyinto kwaphawuleka ngokukhethekile ku senyanga yokuqala. izintokazi eziningi ngesikhathi sokukhulelwa phezu webele avele amagoda ezimbali blue, okuyinto ngenxa anda ukugeleza kwegazi. Izingono washintsha: nabo sikhukhumale mnyama.
Izinkombandlela ukusiza ukwehlisa ubuhlungu
Uma ngesikhathi sokukhulelwa esifubeni ubuhlungu, kudingeka ulandele abanye izincomo, lapho ungehlisa ukungakhululeki. Okokuqala, kubalulekile ukuba ukuthenga ubhodisi ukwesekwa, okumele kwenziwe izindwangu zemvelo. zangaphansi Zokwenziwa ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kugwenywe. Hhayi kuphela eyodwa ubhodisi, ngoba amabele ngalesi sikhathi njalo ziyanda. Uma usayizi ubhodisi kungahlali yakho ubukhulu besifuba ke nelineni kuzokwenza ingono ukucasuka kanye nokuhlukumezeka ezokwenza kuphela neqhaza ubuhlungu anda. Inketho ekahle - kuba izingubo, eziklanyelwe kwabesifazane abakhulelwe, okuyilona elisebenzayo futhi ofanele futhi emva kokubeletha. Njengomthetho, nelineni enjalo uncamela nabancelisayo.
Uma uhlangabezana ukungakhululeki kakhulu ebusuku futhi ufuna ukuqeda lokhu umuzwa, ngiyolala ngesikhindi sangaphansi esekelayo. Ngisho ubuhlungu singenzeka uma ulala ngesisu sakho, ngakho ukukhulelwa kufanele bayakhohlwa umkhuba wakhe, ekuqaleni ngenxa yobuhlungu, esifubeni, bese ngenxa umthamo yayo esiswini.
Elinye iphuzu elibalulekile iyona ukukhethwa colostrum. Namuhla Pharmacy Ungathenga pads ekhethekile ukukuqonda. Ordinary ukotini iduku ubuye efanelekayo le njongo. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa iduku noma pad esikhethekile inhlanzeko kudingeka ukushintshwa njalo. Njengoba isizathu ukuthi une ngesikhathi ubuhlungu ekukhulelweni esifubeni, futhi kungenzeka ukuthi isikhumba ukucasuka. Nakuba egumbini lokugezela, zama kaningi ngangokunokwenzeka, ageze ngamanzi esifubeni efudumele ngaphandle ngokusebenzisa insipho. Ukusebenzisa inhlanzeko esivamile webele owesifazane okhulelwe kungabangela isikhumba esomile.
Kunoma yikuphi, uma une ubuhlungu besifuba ngesikhathi sokukhulelwa, kungcono ubonane mammologist noma Udokotela Wabesifazane, ngoba kukhona amacala anjalo, imbangela yalezi izinhlungu kukhona nezinye izifo.
Ngingaba ugeza phakathi nenkathi yokukhulelwa? Kungakhathaliseki kubhavu ashisayo kuyalimaza ngesikhathi sokukhulelwa
SteelSeries eSiberia V2 Frost Blue: earphone we Uhlolojikelele Izibuyekezo